I-RHEL8: I-Distro Entsha Yebhizinisi Lanamuhla | Kusuka kuLinux
I-RHEL8: i-distro entsha yebhizinisi lesimanje
I-RHEL8 inguqulo entsha kweRed Hat GNU / Linux distro yezindawo zebhizinisi. Yinguqulo ekhethekile yezizathu eziningi, esinye sazo ngenxa yesimo senkampani ngemuva kokuthengwa yi-IBM. Futhi ngoba kube yinguqulo enomsebenzi omningi ngemuva kwayo nezinguquko ezinkulu. Eziningi zalezi zinguquko zenzelwe ukuzivumelanisa nezikhathi ezishintshayo, ukusiza izinkampani ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe abazidingayo.
Kusuka ku-RHEL8 kungagqanyiswa izinto eziningana, enye yazo ukufakwa kwe- I-UBI (Universal Base Image), uhlelo olusha oluvumela iziqukathi ezisuselwa ku-RHEL (Red Hat Enterprise Linux) ukuthi zisebenze kunoma iyiphi ipulatifomu ehambisana nezinga OIC. Ngakho-ke, onjiniyela nabaphathi bohlelo bazoba nohlaka lokwenza lula ukusatshalaliswa nokwenziwa kweziqukathi ezindaweni ezahlukene.
UPodman noKubernetes bayaqhubeka nokudlala indima ebalulekile ku-RHEL8. Kepha kunezinye izinto ezibabazekayo, njenge I-AppStream, ezinye izindaba ezinhle zabathuthukisi. I-Red Hat yenze ukuthi batholakale indawo yokugcina ebhekele ukuhlinzeka ngamathuluzi entuthuko, njengokuhlela izilimi, izinhlaka namanye amathuluzi. Zingavuselelwa ngaphandle kokuthinta izingxenye eziyinhloko zohlelo lokusebenza.
Izinto ezintsha nezintsha ozozithola ku-RHEL8 yilezi Ama-DevOps afanelekayo. Amamojula we-Ansible alungiselelwe ngaphambili wokunika amandla ukugeleza kokusebenza okuzenzakalelayo kwemisebenzi ejwayelekile futhi eyinkimbinkimbi kubaphathi bohlelo. Ngaphandle kwalezi zinsizakusebenza, ngithanda futhi ukugqamisa ezinye izinto ezifana neWebhu Console ukunikela ngesixhumi esibonakalayo esinembile futhi esingaguquguquki sokuphathwa nokuqapha uhlelo.
Konke lokhu nokunye okuningi yilokho ozothola kukho i-RHEL8 entsha! Futhi… Ngizoba nezindaba eziningi ezihlobene nezingcono ze-RHEL8 kungekudala. Ngakho hlala ubukele kusuka ku-Linux.net nakuLinuxAdictos.com.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-RHEL8: i-distro entsha yebhizinisi lesimanje